ဆန်ချို ကို စျေးဖြတ်လိုက်တဲ့ မန်ယူနိုက်တက် နဲ့ . . . . . ယနေ့အတွက် နောက်ဆုံးရ အားကစားသတင်းများ - SPORTS MYANMAR
ဆန်ချို ကို စျေးဖြတ်လိုက်တဲ့ မန်ယူနိုက်တက် နဲ့ . . . . . ယနေ့အတွက် နောက်ဆုံးရ အားကစားသတင်းများ
မန်ချက် စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ဟာ ဒေါ့မွန် စတားလေး ဂျေဒန် ဆန်ချို အတွက် သူတို့ ပေးနိုင်မယ့် အမြင့်ဆုံး စျေး ကို ထုတ် ဖော် လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒေါ့မွန် ဘက်က ဆန်ချို အတွက် စျေးကွက် ပေါက်စျေး အတိုင်း ကမ်းလှမ်း လာမှု တွေကို မျှော်လင့် ထားပေမယ့် ယူနိုက်တက် ကတော့ အင်္ဂလန် သားလေးကို ပေါင် သန်း ၅၀ ထက် ပိုမပေး နိုင်ဘူး လို့ သတင်း ထွက်ပေါ် လာခဲ့ ပါတယ် ။
အင်တာ မီလန် ဟာ လာမယ့် ရာသီ မှာ ၀တ်ဆင် မယ့် ဂျာစီသစ် ကို မိတ်ဆက် သွားခဲ့ ရာမှာ ပရိသတ်တွေ ရဲ့ ဝေဖန်မှု တွေ နဲ့ ရင်ဆိုင် ခဲ့ရ ပါတယ် ။ အင်တာ ရဲ့ အိမ်ကွင်း ဂျာစီ ဟာ ဒေါင်လိုက် ရေလှိုင်းပုံစံ ဖြစ်ပြီး အပြာ – နက် အစင်းတွေ ကို ဇစ်-ဇပ် ပုံစံ နဲ့ ထည့်သွင်းထား တယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
အာဆင်နယ် ဟာ အငှား ခေါ်ယူ ထားတဲ့ ဒါနီ ဆီဘယ်လော့ ကို စာချုပ် သက်တမ်း ပြည့်ချိန် မှာ အပြီး သတ် ၀ယ်ယူ တော့မှာ မဟုတ်ဘဲ ရီးရဲ မက်ဒရစ် ကို ပြန်လည် စေလွှတ် မယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
RB လိုက်ပ်ဇစ် တိုက်စစ်မှုး တီမို ဗာနာ ကတော့ ချဲလ်ဆီး နည်းပြ လမ်းပတ် နဲ့ ပြောစကားတွေ ဟာ သူ့ကို အသင်း ပြောင်းရွှေ့ ဖို့ အဓိက တွန်းအား ဖြစ်စေခဲ့ တယ်လို့ ဖွင့်ဟ ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
လီဗာပူး နောက်ခံလူ ဂျိုရယ် မာတစ် ကတော့ အဲဗာတန် နဲ့ ပွဲမှာ ရရှိ ခဲ့တဲ့ ဒဏ်ရာ ကြောင့် လက်ကျန် ပွဲစဉ် အားလုံး ကို လွဲချော် တော့မှာ ဖြစ်တယ် လို့ သိရှိ ရ ပါတယ် ။
အာဆင်နယ် ဟာ ၀ုဖ်ဘတ် တိုက်စစ်မှုး ၀က်ဂ်ဟော့စ် ကို ခေါ်ယူ ဖို့ စိတ်ဝင်စား နေပြီး အရပ် ၆ ပေ ၅ လက်မ မြင့်တဲ့ တိုက်စစ်မှုး အတွက် ပေါင် ၃၂ သန်း အသုံးပြု ရဖွယ် ရှိတယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။
ယူဗင်တပ် ကွင်းလယ် ကစား သမား ဟောင်းကြီး အန်ဒရေ ပီယာလို ကတော့ လာမယ့် ရာသီမှာ အသင်းရဲ့ ယူ-၂၃ နည်းပြ အဖြစ် ၀င်ရောက် လုပ်ကိုင် သွားမယ် လို့ သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
ယူဗင်တပ် ဟာ အာသာ မယ်လို ကို ပီယာနစ် နဲ့ အလဲအထပ် ပြုလုပ် အပြီးမှာတော့ အင်္ဂလိပ် ကလပ်တွေ နဲ့ သတင်းကြီး နေတဲ့ ဗလင်စီယာ တောင်ပံ ကစား သမားလေး ဖာရန် တောရက်စ် ကို ခေါ်ယူဖို့ မြားဦး လှည့်သွား ခဲ့တယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။
မန်စီးတီး အသင်း ဟာ ဘာစီလိုနာ အကယ်ဒမီ မှာ ကစား နေတဲ့ ၁၆ နှစ် အရွယ် နောက်ခံလူ ဟွမ်လောရစ် ကို ခေါ်ယူ နိုင်ဖို့ နီးစပ် နေပြီလို့ သိရ ပါတယ် ။
မန်ချက် စတာ ယူနိုက်တက် နဲ့ အိုင်ယာလန် အသင်း ခေါင်းဆောင်ဟောင်း ရွိုင်ကင်း ဟာ အဇာဘိုင်ဂျန် လက်ရွေးစင် အသင်း နည်းပြ အဖြစ် လုပ်ကိုင် ဖို့ ဆွေးနွေး ပြောဆို နေကြတယ် လို့လည်း သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
ဒေါ့မွန် အသင်းကတော့ နောက်ခံလူ ဟာခီမီ ဟာ အငှား စာချုပ် ပြည့်သွားပြီ ဖြစ်တာ ကြောင့် မနက်ဖြန် မှာ အသင်းကနေ ထွက်ခွာ တော့မယ် လို့ အတည်ပြု သွားခဲ့ပြီ ဖြစ် ပါတယ် ။ လောလော ဆယ်မှာတော့ ဟာခီမီ ကို အင်တာမီလန် က ခေါ်ယူ နိုင်ဖို့ အလားအလာ ကောင်းနေတယ်လို့ သတင်း ထွက်ပေါ် ထားပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး နည်းပြ ဖရန့် လမ်းပတ် ကတော့ ယူနိုက်တက် ကနေ စာချုပ်ပြည့်လို့ အလွတ် ထွက်ခွာ လာမယ့် အိန်ဂျယ် ဂိုးမက် ကို ခေါ်ယူ ဖို့ အတွက် လုပ်ဆောင် သွားခြင်းမျိုး မရှိပါဘူး လို့ ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
မန်ချက် စတာ ယူနိုက်တက် နဲ့ နောဝှစ်ချ် စီးတီး တို့ ကစား ခဲ့တဲ့ FA Cup ပွဲစဉ် ဟာ ဘီဘီစီ ရဲ့ သမိုင်း တစ်လျောက် လူကြည့် အများဆုံး ပွဲစဉ် ဖြစ်လာခဲ့ ပါတယ် ။ ယူနိုက်တက် က အချိန်ပို မှာ ၂ – ၁ နဲ့ အနိုင် ရခဲ့တဲ့ အဆိုပါပွဲ ကို ဘီဘီစီ ကနေ ကြည့်ရှုသူ ၆.၄ သန်း ရှိခဲ့ တယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
လာမယ့် ရာသီ မှာ ဇီယက်ချ် ကို ကိုင်တွယ်ရမယ့် လမ်းပတ် ကို ကြိုတင် သတိပေး မက်ဆေ့ချ် ပေးခဲ့တဲ့ #တမ်ဟက်
လီဗာပူးကို စရောက်လာခါစက သူအဖြစ်ချင်ဆုံး အရာကို ထုတ်ဖော်သွားခဲ့တဲ့ မိုဟာမက်ဆာလား